मास्क र पीपीई माग गर्ने भारतीय डाक्टरलाई किन लगियो मेन्टल हस्पिटल ? - Birgunj Sanjalमास्क र पीपीई माग गर्ने भारतीय डाक्टरलाई किन लगियो मेन्टल हस्पिटल ? - Birgunj Sanjalमास्क र पीपीई माग गर्ने भारतीय डाक्टरलाई किन लगियो मेन्टल हस्पिटल ? - Birgunj Sanjal
मास्क र पीपीई माग गर्ने भारतीय डाक्टरलाई किन लगियो मेन्टल हस्पिटल ?
७ जेष्ठ २०७७, बुधबार १५:००
पाठक संख्या ३८५
नयाँदिल्ली | आन्द्र प्रदेशको विशाखापट्टनमस्थित एक चिकित्सक सरकारको आलोचना गरेपछि कुटपिटसँगै प्रहरीको नियन्त्रणमा बस्नु परेको छ । डा. के सुधाकरले हालै कोभिड १९ का बिरामीको उपचारको क्रममा पीपीई अभाव भएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेपछि उनलाई अस्पतालबाट हटाइनुका साथै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।
शरीरको माथिल्लो भागमा कपडाविना देखिएका डा. के सुधाकरमाथि प्रहरीले कुटपिट गरेको भिडिओ समेत सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छ । यसलाई लिएर विपक्षी दलका नेताहरुले सरकारको कडा आलोचना गरेका छन् । डा. के सुधारकर विशाखापट्टनम जिल्लाको नरसीपटनम क्षेत्रीय सरकारी अस्पतालमा ‘एनेस्थियोलोजिस्ट’को रुपमा कार्यरत थिए ।
पछिल्लो महिना उनीमाथि अनुशासनको कारवाही गरी निलम्वन गरिएको छ । उनले पीपीई, एन ९५ मास्क र किट्स अभाव भएको भन्दै सरकारको आलोचना गर्न थालेपछि उनलाई कामबाट निश्कासन गरिएको थियो ।
डा. सुधारकरको हात पिठ्युँमा बाँधिएको अवस्थामा उनीमाथि कुटपिट भइरहेको र समातेर उनलाई अटो रिक्सामा राखेर प्रहरी स्टेशनमा लगिएको दृश्य भाइरल बनेको भिडिओमा देखिन्छ । यस घटनालाई लिएर विपक्षी दलहरुले सरकारले एक चिकित्सकसँग बदला लिइरहेको भन्दै घटनाको विरोध गरेका छन् ।
यस घटनालाई लिएर विपक्षी दल टीपीडीको महिला शाखाकी नेता बंगलापुडी अनिताले आन्द्र प्रदेशको उच्च अदालतमा पत्र मार्फत नै मुद्दा समेत दायर गरेकी थिइन् । अदालतले यस मुद्दाको सुनुवाई २० तारिखमा गर्ने जनाएको थियो । विशाखापट्टनमको प्रहरीले भने चिकित्सकलाई मदिरा सेवन गरेको र उनको मानसिक अवस्था बिग्रिएको भन्दै मानसिक अस्पताल पठाइदिएको छ ।
प्रहरीका अनुसार उनी अर्धचेत अवस्थामा मदिरा पिएर सडकमा आएको र तथानाम बोलेको अवस्थामा आफूहरुले मानसिक अस्पतालमा पठाइएको हो । चिकित्सकको सल्लाह अनुसार नै अफूहरुले उनलाई ‘मेन्टल केयर हस्पिटल’ पठाएको प्रहरीको भनाइ छ ।
तर पछिल्लो समय यस घटनाले राजनीतिक रंग लिइसकेको छ । विपक्षी दल तेलुगुदेसम पार्टीले चिकित्सकसँग बदला लिएको भन्दै यो घटना अमानवीय र गैरकानुनी भन्दै उनको रिहाइको लागि माग गर्दैआएको छ । चिकित्सकको समर्थनमा शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनको पनि आयोजना विपक्षी दलले गरेको छ । सरकारी मानसिक अस्पतालका चिकित्सकहरुले भने उनलाई १५ दिन स्वास्थ्य निगानीमा राखिनुपर्ने बताएका छन् ।
सुधाकर नरसीपट्टनम क्षेत्रीय अस्पतालमा एनेस्थियोलोजिस्टको रुपमा कार्यरत थिए । २ अप्रिलमा जहाँ तीन कोरोना संक्रमणका केस आए । त्यसबेला प्रहरी अधिकारी र स्थानीय नेताहरु समेतको अस्पतालका चिकित्सकहरुसँग बैठक बस्यो कि, कोरोना बिरामीको उपचार कसरी गर्ने भन्ने बारे । डा. सुधाकरले भने बैठकमा पीपीई, एन ९५ मास्क र किट्सको अभावमा उपचार सम्भव नभएको भन्दै सरकारको कडा आलोचना गरे । यस्तो अवस्थामा अधिकारीहरुले उनलाई त्यहाँबाट हटाइदिए ।
डा. सुधाकरले निरन्तर सरकारमाथि आलोचना गरिरहे । उनले सरकारको आलोचना गरेको गरेको भिडिओ पनि भाइरल बनेको थियो । आन्द्र प्रदेश सरकारले यससँगै उनलाई निलम्वन गरिदियो । चिकित्सकले पछि फेरि मुख्यमन्त्रीसँग माफी माग्दै आफ्नो निलम्वन खारेज गर्न आग्रह गरेको भिडिओ सार्वजनिक भयो । जब कि, सरकारले उनको पक्षमा केही निर्णय गरेको छैन ।
यसबीचमा चिकित्सकले आफ्नो पैसा चोरिनुका साथै धम्की आएको समेत बताएका छन् । फोन र पैसा चोरी गरी आफूमाथि कुटपिट भएको र धम्की आएको उनको भनाइ छ । प्रहरीले हिरासतमा लिनुअघि उनले मिडियामा यस्तो प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
हाल चिकित्सकलाई मानसिक उपचारका लागि भन्दै मेन्टल हस्पिटलमा राखिएको छ । चिकित्सकका परिवारले भने उनी मानसिक बिरामी नभएको बरु घरमा पठाइदिन आग्रह गरेका छन् । चिकित्सककी आमा कावेरीले सरकारमाथि प्रश्न उठाएकै कारण आफ्नो छोरो हिरासतमा पुगेको भन्दै उनको रिहाइको लागि माग गरेकी छन् ।